ဤရွေ့ကားယနေ့များအတွက်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်အမေဇုံကမ်းလှမ်းချက်များ | Androidsis
အာရုန်သည် Rivas | | မိုဘိုင်း, လဲ tutorial
အမေဇုန်လိုဆိုက်တစ်ခုကိုသွားတဲ့အခါ၊ ပထမဆုံးစဉ်းစားတာကတစ်ခုခုဝယ်တာပဲမဟုတ်လား ဒုတိယတစ်ခုကငွေစုဖို့လား။ ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ မင်းကမင်းလိုချင်တဲ့အရာဖြစ်ပြီးမင်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့စမတ်ဖုန်းကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်ကြိုဆိုပါ။ သင်မှန်သောနေရာ၌ရှိသည်။
ဒီအပိုင်းမှာ ယနေ့ 00:00 နာရီမှဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်၊ အကောင်းဆုံးဆိပ်ကမ်းရှိစပိန်နိုင်ငံတွင် ၂၃:၅၉ နာရီအထိကြာရှည်မည့်ကမ်းလှမ်းမှုများသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်မည်သည့်အရာများဖြစ်သည်။ အမေဇုံအတွက်သင့်အတွက်အထူးလျှော့စျေးများကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးစျေးဝယ်ရန်အိတ်ဆောင်ကိုပြင်ဆင်ပါ။ ပြင်ဆင်ပြီးပြီလား
1.1 ASUS ZenFone2Laser ZE601KL ကိုယူရို ၁၉၉ ထက် ၁၆၉ ယူရိုသာရှိသည်
1.2 ၁၈၉၉.၉၉ ယူရိုအစား ၁၄၉ ယူရိုသာရှိသော Alcatel A3 XL
1.3 Alcatel A3 ကိုပုံမှန်ဈေးထက် ၁၅၉.၉၉ ယူရိုအစား ၁၀၉ ယူရိုသာရှိသည်
1.4 Alcatel SM03-WH သည်ယခင်စျေးနှုန်း၏ ၈၉ ယူရိုအစား ၄၄ ယူရိုသာရှိသည်
1.5 တရား ၀ င်စျေးနှုန်း၏ ၃၃၉ ယူရိုအစား Samsung Galaxy J7 (2017) ကို ၂၃၉ ယူရိုသာရှိသည်
2 ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်အထိစမတ်ဖုန်းများတွင်တွန်းလှန်နိုင်သည့်ကမ်းလှမ်းမှုများ
2.1 Moto G 5th Generation ကို ၁၉၉ ယူရိုဈေးနှုန်းထက် ၁၄၉ ယူရိုသာပေးသည်
ASUS ZenFone2Laser ZE601KL ကိုယူရို ၁၉၉ ထက် ၁၆၉ ယူရိုသာရှိသည်
ဒီနေ့မှာ ၆ လက်မ HD မျက်နှာပြင်၊ 6GB RAM နှင့် 3GB သိုလှောင်မှုနေရာတို့ဖြင့်အလယ်အလတ်တန်းစား terminal ကို ၀ ယ်ယူနိူင်သည်။အခြားအရာတစ်ခုခုအတွက်သုံးရန်အဖိုးတန်ယူရို ၃၀ ကိုစုဆောင်းပါ။ ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကုန်ဆုံးမတိုင်မီဝယ်ယူရန်ပြေး!
၁၈၉၉.၉၉ ယူရိုအစား ၁၄၉ ယူရိုသာရှိသော Alcatel A3 XL
အကယ်၍ သင်သည်ယူရို ၃၀ ထက်ပိုသောငွေကိုချွေတာရန်ကြိုးစားနေပါကသင်၏အိတ်ကပ်ကပိုမပေးနိုင်လျှင်အနားယူပါ။ Alcatel A3 XL ကို ၆ လက်မအရွယ်လျှော့စျေးဖြင့်လျှော့ချထားပြီး6ယူရိုရှိသည်။.
Alcatel A3 ကိုပုံမှန်ဈေးထက် ၁၅၉.၉၉ ယူရိုအစား ၁၀၉ ယူရိုသာရှိသည်
ချွေတာခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင် Alcatel သည်လျှော့စျေးရှိသောဖုန်းများနှင့်လာပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်သည်။
ဤအချိန်တွင် ၃၀% ကျော်လျှော့စျေးဖြင့် Alcatel A30 သည်စုစုပေါင်းဈေးနှုန်း ၁၀၉ ယူရိုရှိသည် ၅ လက်မဖန်သားပြင်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ သံသယမရှိဘဲမည်သူမဆိုရရှိနိုင်သောအရာတစ်ခုခု။
Alcatel SM03-WH သည်ယခင်စျေးနှုန်း၏ ၈၉ ယူရိုအစား ၄၄ ယူရိုသာရှိသည်
သင့်မှာစမတ်နာရီမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒါကမင်းရဲ့အခွင့်အရေးပဲ။ ၄၉ အလွန်စျေးပေါသောယူရိုအတွက်သင်ဤနာရီကိုဝယ်နိုင်သည် သင်၏ Bluetooth နှင့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ရေခံနိုင်မှုတို့ဖြင့်သင်၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရင်ဆိုင်ရန်။ အခွင့်ကောင်းယူသည်!
တရား ၀ င်စျေးနှုန်း၏ ၃၃၉ ယူရိုအစား Samsung Galaxy J7 (2017) ကို ၂၃၉ ယူရိုသာရှိသည်
စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ကို ဦး ဆောင်နေသောတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းတစ်ခုဖြစ်သည် Samsung Galaxy J7 (2017) သည်လျှော့စျေးယူရို ၁၀၀ ဖြစ်သည်. တစ်ခုခုကို Eh, မှုမရှိခြင်းကိုမဟုတ်?
၅.၅ လက်မ FullHD မျက်နှာပြင်နဲ့ 5.5Ghz ရှစ် core ပရိုဆက်ဆာပါတဲ့ဒီအစွမ်းထက်တဲ့စမတ်ဖုန်းကိုသင်ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ အဆိုပါကမ်းလှမ်းမှုကို 23:59 p.m. မှာယနေ့အဆုံးသတ်.
ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်အထိစမတ်ဖုန်းများတွင်တွန်းလှန်နိုင်သည့်ကမ်းလှမ်းမှုများ
Moto G 5th Generation ကို ၁၉၉ ယူရိုဈေးနှုန်းထက် ၁၄၉ ယူရိုသာပေးသည်
သငျသညျသူ့ကိုပြောပြနိုင်ပါတယ် ဟယ်လို၊ အမေဇုံမှ Moto G 5th Generation သို့နှင့်သင့်ကိုယူရို ၅၀ သက်သာသည် 1.4Ghz octa-core ပရိုဆက်ဆာဖြင့်သုံးသောမိုဘိုင်းအတွက်။ ဒီကမ်းလှမ်းချက် 31:23 p.m. မှာဒီနှစ်ဒီဇင်ဘာလ 59 ရက်နေ့တွင်ကုန်ဆုံးမတိုင်မီသို့သော်အားသာချက်ယူပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » ဤရွေ့ကားယနေ့များအတွက်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်အမေဇုံကမ်းလှမ်းချက်များဖြစ်ကြသည်